Magnetic edluliselwe Latching
NCR yasungulwa ngo 2003, njengomunye woFakazi abakhiqizi eziholela edluliselwe eChina ngenhloso abasebenzi abangaphezu kuka-600. Singabantu ukuze akunike imali eziphambili kakhulu imishini ukukhiqizwa nobuchwepheshe emhlabeni wonke. Okuphuma yonyaka izingcezu angaphezu kwezigidi ezingu-100.
Umkhiqizo uhla kuhlanganisa IElectromagnetic edluliselwe, Latching edluliselwe, edluliselwe Socket, Solid State edluliselwe, Amandla semiconductor Module futhi Ibhuloho Rectifier njll
Ngaphansi ISO9001: 2000, ISO14001: 2004 & OHSASA18001 Quality System, ezazikuyo esasizithole CCC, CQC, CE, UL & TUV ukwamukelwa futhi RoHS isitifiketi imithetho. Kususelwa izinga okuthembekile, kanye kakhulu kwamakhasimende, imikhiqizo yethu zidayiswa kahle wonke mpumalanga China futhi emhlabeni wonke.
Ukuze kuzuzwe ukuthuthukiswa okugcinekayo ezimakethe zomhlaba, thina kutawugcizelela ukuphathwa ingqondo "Ubuqotho & ukuphakama", ukuphakela aziwayo, aphakeme emva-ukudayiswa service futhi esigcwele ukulethwa ukuze kuhlangatshezwane nesidingo of bonke amakhasimende emhlabeni wonke.